HORDHAC :Crystal Palace VS Man City? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ciyaarta – Gool FM
HORDHAC :Crystal Palace VS Man City? Xogta kulanka iyo xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey ciyaarta
Bashiir April 14, 2019
( England) 13 Abriil 2019 Kooxda Manchester City ayaa garoonka Selhurst Park kula bara tami doonta Kooxda Crystal Palace oo la ogaa in dhagta dhiiga ay u dartay kulankii koowaad oo ka dhacay qlacada kooxda Sky Bule.
City ayaa ku fakareysa in aysan lumin dhibac qura xitaa madaama Kooxda lasaaran safka hore ee baska ee Liverpool ay caawa mari doonta tijaabo adag wallow lagu ciyaaraya garoonka mucamarka ah ay ka arimiso Liverpool.
Wararka labada koox ka hor kulanka :
Daafaca kooxda Crystal Palace ee James Tomkins ayaa seegi doona inta ka dhiman xilli ciyaareedkaan ka dib markii uu dhaawac ka soo gaaray kulan ciyareedkii Newcastle.
Daafaca dhexe ee Mamadou Sakho ayaa weli maqan la maqan dhaawac jilibka ah laakiin Max Meyer ayaa diyaar ah ka dib markii uu seegay kulankii ugu danbeyey oo ay kooxdiisu ciyaarto.
Geesta kale Manchester City xidigooda Bernardo Silva ayaa seegay guul darradii ka soo gaartay Tottenham tartanka Champions League waxaana uu wajahayaa tijaabo caafimaad si loo hubiyo in uu ciyaari karo iyo in kale.
Oleksandr Zinchenko, ayaa sidoo kale la hubin doonaa xaalkiisa kaas oo ka maqnaa labadii kulan ee ugu dambeyey ee ay ciyaarto kooxda City madaama uu ka dhaawacmay muruqa.
Daafaca dambeedka bidix ee Benjamin Mendy ayaa laga yaabaa inuu ku soo bilowdo kulankiisii ugu horeysay tan iyo markii uu ku dhaawacmay Manchester derby shan bilood ka hor, halka Kevin de Bruyne iyo Leroy Sane ay dib ugu soo laaban karaan safka koowaad.
Kulan : Crystal Palace VS Man City? ( Premier League)
Goobta : Selhurst Park
Goorta : 4:05 oo Galabnimo
Garsoorka : Martin Atkinson
Xaqiiqooyinka laga diwaan giliyey Ciyaarta ka hor intaan la baasan:
Manchester City ayaa guul la’aan ah labadii kulan ee ugu dambeysay ee ay ka horyimaadeen Crystal Palace, oo ay ku jirto guuldaradii 3-2 oo ka dhacday Etihad Stadium horaantii xilli ciyaareedkan. Ka hor inta aysan ku guuleysan 7 guulood oo isku xigta oo ay ka horyimaadeen Palace tartamada oo dhan.
Palace ayaa dhameystiri karta guul ay ka gaarto kooxda Man City labada kulan ee horyaalka markii ugu horeysay tan iyo 1972-73.
Manchester City ayaa badisay sideed kulan oo isku xigta oo Premier League ah, iyadoo shabaqa ilaashatay lix ka mid ah 7dii kulan ee ugu danbeysay.
Waxay badiyeen sideed ka mid ah 10-kii kulan ee ugu dambeeyay ee ay la ciyaaraan kooxaha reed London (1bareejo iyo,1 qasaaro), guuldaradaas ayaana aheyd 2-0 waxa ayna ka soo gaartay Chelsea bishii December.
Palace ayaa badin karta labo kulan oo isku xigta horyaalka markoodii labaad xili ciyaareedkan iyaga oo horey u badiyey labo kulan oo isku xigta bishii December kaddib markii ay ka adkaadeen kooxaha Leicester iyo Manchester City.
Eeg safafka macquulka ah ka hor kulanka :
Kooxda Manchester United oo guul wax ku ool ah ka gaartay West Ham+Sawiro
HORDHAC : liverpool VS Chelsea? Miyey Chelse mar kale ciil kaambo iyo cuqdad ay ku beeri kartaa Reds? iyada oo la ogaa in ay jalaafo u dhigeen iyaga oo ku haminaya hanashada horyaalka